Booliska Kenya oo sheegay iney dad argagixisanimo ku eedeysan ka soo qabteen xerada Dhadhaab - Halbeeg News
Booliska Kenya oo sheegay iney dad argagixisanimo ku eedeysan ka soo qabteen xerada Dhadhaab
NAIROBI (HALBEEG)- Xerada qaxootiga Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari, Kenya oo ah xero ay ku jiraan qaxooti fara badan oo Soomaali ah ayaa ka mid ah meelaha ay saameeyeen howlgallada ammaan ee ka socda Kenya, kuwaasoo laamaha amnigu ay bilaabeen ka dib weerarkii hoteelka Dusit.
Taliyaha ciidamada booliska dalka Kenya Joseph Boinnet ayaa qaar ka tirsan warbaahinta u sheegay in xerada qaxootiga ee Dhadhaab ay kasoo qabteen dad laga shakiyay isaga oo intaa ku daray in dadka lasoo qabtay uu ku jiro qof Soomaali ah oo wata baasaboor ajnabi.
“Waxaannu soo xirnay 12 qof oo ku sugnaa xerada qaxootiga Dhadhaab loogana shakisanyahay xiriirro argagixiso, midkood ayaana wata baasaboorka dalka Niyuusiilaan oo ay ku qoranyihiin magacyo kala duwan,” ayuu yiri taliyaha oo aan faafaahin kale ka bixin dadka kale ee ay soo qabqabteen.
Taliyaha ayaa sheegay in dadka la soo qabqabtay dhammaantood ay baaritaan ku hayaan isaga oo diiday in uu caddeeyo in ay xariir la lahaayeen kooxdii fulisay weerarkii hotel Dusit.
Illaa iyo iminka 17 qof ayaa kasoo hor muuqday maxakamad ku taalla Kenya kuwaasoo ku eedeysan in ay ku lug lahaayeen weerarkii dhiigga badani ku daatay ee bartamihii bishan lagu qaaday hotel ku yaalla magaalada Nayroobi.
Soomaaliya iyo Qadar oo yeelanaya xiriir iskaashi oo millatari